Faroole “Xasan Sheekh waxaa leeyahay isaga tag xafiiska, C/llaahi Yuusuf-ba maalin buu ka tagay” * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faroole “Xasan Sheekh waxaa leeyahay isaga tag xafiiska, C/llaahi Yuusuf-ba maalin buu ka tagay”
By MAREEG	 On Sep 26, 2015
Madaxweynihii hore ee Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Soomaaliya inuu is casilo, isagoo ku eedeeyay in saddexdii sano ee xafiiska joogay ay kaga dhamaatay khilaaf iyo is qab qabsi.
C/raxmaan Faroole oo ka hadlayay Garowe ayaa sheegay in saddexdii sano ee dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh jirtay aysan waxba qaban, isla markaana tahay saddex sano khasaartay sida uu yiri.
“Saddexdii sano wax la sheego oo la qabto ma jirto, wax khasaaray mooyaane, saddex sano waxay kaga dhamaatay khilaaf gudaheeda ah iyo Ra’iisul Wasaarayaal la badalay, maamuladii loo igmaday oo khilaaf soo kala dhex galay, maanata waxaa is heysta labadii hey’adood waa Madaxtooyada iyo Baarlamaanka”ayuu yiri C/raxmaan Faroole.
Mr Faroole ayaa sheegay inuu isaga qabo in doorasho dalka ka dhici karto hadii si fiican loo shaqeeyo, waxaase uu xusay inuusan garan karin wax aan doorasho aheyn oo doorasho ah inay dalka ka dhacdo.
“Heshiiska hada la soo saaray ee Beesha caalamka door ku laheyd, ee la leeyahay waxaa la raadinayaa waxaan doorasho aheyn oo doorasho ah, aniga ma garan waxaan doorasho aheyn oo doorasho ah maba dhici karto, aniga waxaa qabaa in doorasho ay dhici karto hadii si fiican loo shaqeeyo”ayuu yiri Mr Faroole.
Sidoo kale waxaa uu ugu baaqay Madaxweyne Xasan Sheekh in hadii uusan waxba qaban karin mudada hartay inuu is casilo, waxaana uu xusay in waqtiga haray uu aaminsan yahay in wax la qaban karo, sida meelaha khilaafka ka jira laga heshiiyo.
“Xasan Sheekh waxaa leeyahay hadii aadan waxba qaban karin isaga tag, C/llaahi Yuusuf maalin buu ka tagay, isagoo aan Mandate-kiisu dhamaanin, ceebna ma ahan hadii aad is casiho oo aadan waxba qaban karin”ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Puntland.
Si kastaba ha ahaatee dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa u hartay hal sano, iyadoo laga filayo inay sanadka 2016 ay ka dhacaan nooc doorasho oo ka duwan tii 2012, kadib markii Baarlamaanka iyo Xukuumadda ay sheegeen in aanay dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod.
Guddoonka sare ee Baarlamaanka oo go’aan ka soo saaray Mooshinka ka dhanka ah M.weyne Xasan
Wariye caan ah oo BBC ka tagay